I-pastry ye-Intolerants ne-Vegans Cake For You 3.0 - Messina
I-pastry ye-Intolerants and Vegans - Ikhekhe Lakho Messina
Ukudla okumnandi kokhilimu abajwayelekile baseSicily nako-Vegans kanye nabangeneleli
I-pastry ye-Intolerant and Vegans, "Ikhekhe Lakho 3.0" kugcwele futhi kumukelekile ibha etholakala Messina. Lapha kulungiselelwe okuningi ubuhle della Isiko laseSisilia futhi omuhle kakhulu ibhulakufesi yenzelwe abantu vegan e ukungabekezeleli.
I-pastry ye-Intolerants ne-Vegans "Ikhekhe Lakho Wena 3.0" - Ama-dessert aklanyelwe wonke umuntu eMessina
khekhe ngokudla okumnandi, "Ikhekhe Lakho 3.0" igcwele kahle Isitolo se-Bar Cafeteria Ice Cream, ekhona ku Messina, yaziswa kakhulu yibo bonke abahlushwa ukungabekezeleli njengalena gluten. I-Vegan khekhe par ubuhle, ilungisa izibiliboco eziningi nezinto ezikhethekile ezifanele abantu vegan, okubandakanya i-granite, ama-croissants, ama-croissants agcotshisiwe futhi angenawo izinto, i-gelati nokunye okuningi. Zonke izimnandi zizothola lapha namakhekhe zilungiselele ukujabulisa lonke ulaka, ngamehlo kubo bonke labo abantu abangabekezeleli ezidinga izindlela zokuqapha ezikhethekile ezilungiselela lokho ezikudlayo. Ubuhle e Ukuphepha kokudla hamba ngesandla lapha.
E-"Cake For You 3.0" khekhe ne-Ice Cream Shop zonke izithako azinayo i-Gluten
Futhi bayaziswa kakhulu ibhulakufesi, kuningi, kunamakha, kuyamnandi futhi, ngaphezu kwakho konke, nge izithako ngaphandle gluten noma ezinye izinto ezingadala lokho ukungabekezeleli, njengoba isidlaliso noma il i-lactose. Ngaphezu kokulungiselela Caffè iphunga noma ama-croissants ithambile ngokugcwala okunokhilimu kukho konke ukunambitheka, "Okwewe 3.0" nakho kuhle kakhulu I-Gelateria. Lapha, eqinisweni, ungajabulela futhi okuhle kakhulu okuzenzela u-ayisikhilimu nokunambitheka okuningi kuyatholakala. Lapho Isitolo sekhofi se- "Cake For You 3.0" inikeza amakhasimende ayo izibiliboco ezimnandi nsuku zonke, njenge, isibonelo, inqwaba ye pie, imikhiqizo ye ibhikawozi elincane, ama-dessert nemililo. Ukunaka izithako kanye ukuphepha kokudla bayizinsika zendawo futhi babonakala kukho konke ukuluma nakuwo wonke umkhiqizo olungiselelwe lapha. Iya ku "Ikhekhe Lakho 3.0" Ibha kuzoba yintokozo yangempela palate futhi nangomqondo wokuhogela, ngenxa yephunga elingenakuphikwa lokudla okutholakalayo. Ukwenza umuzwa wokunambitha ube mnandi ngokwengeziwe, imvelo eyamukelayo nabasebenzi abanomusa bazoyinakekela.
Ikheli: Nge-dei Dolci, n. 1
Umphakathi: Silandele kusuka lapha
Inombolo ye-VAT: 03553530837